Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSowerbys
I-Prospero's Barn kukukhanya okugqwesileyo kunye noguqulo oluphangaleleyo lwebhanti esandula ukuhlaziywa ngabanini abatsha, kunye nesilingi ephezulu enophahla oluphezulu kunye nokulungiswa kwangoku kunye nokufakelwa. Kumgangatho ongezantsi kukho isicwangciso esivulekileyo esineholo yokungena enobude obugcweleyo ekhokelela kwindawo enkulu yokutyela ekhitshini enento yonke kunye negumbi lokuhlala elithandekayo elinesitshisi seenkuni. Kumgangatho ongaphezulu kukho amagumbi amabini okulala anophahla oluphezulu ngalinye linegumbi lalo leshawari ye-en-suite yangoku. Ngaphandle kukho indawo ezolileyo yepatio elungele ukuhlala ngasemva kunye nokuphumla, iimbono ezingaphambili ngamasimi kwaye ibekwe ngokuzolileyo kumgama nje omfutshane ukuya kwilali yaseBurnham eluhlaza kunye nokukhethwa kwayo okubalaseleyo kweevenkile ezizimeleyo kunye neendawo zokutya.
Unxweme oluhle lwaseNorfolk olungaguqukiyo lufikeleleka ngokulula kwimizuzu eli-10 yokuqhuba.
Yonke iplani evulekileyo eneholo yobude obuphindwe kabini enesilingi evalekileyo.
Ikhitshi: Ikhaphukhaphu kwaye iphangalele ngeekhabhathi ze-oki ezifakelweyo kunye nomphezulu womsebenzi wegranite, isipheki soluhlu, isitya sokuhlamba esidityanisiweyo, ifriji / isikhenkcezisi esigcweleyo kunye netafile yokutyela enezitulo ezithandathu.
Igumbi lokuSebenza: liqukethe iwasha / isomisi, isinki kunye neekhabhathi zokugcina.
Igumbi lokuhlambela: Isitya sesandla kunye neWC.
Igumbi lokuhlala: indawo enkulu yokuhlala enesofa enkulu etofotofo kunye nezihlalo ezibini, indawo yeencwadi eneencwadi ezikhethiweyo zemidlalo isitovu esibaswa ngamaplanga esine-stainless steel flue, i-flat screen TV, iDVD. Kukho umnyango ophumela kwigadi yaseyadini.
Izinyuko azikho mnqantsa kwaye zinesitayile sesandla. Omabini amagumbi okulala anesilingi ezikhazimlisiweyo eziphezulu ezinembono entle efikelela emaphandleni.
Igumbi lokulala 1: Ibhedi enkulu enkulu, izibane ezisecaleni kwebhedi, ikhabhathi eyakhelweyo eneshelufu kunye neentsimbi.
Igumbi lokuhlambela le-En-suite: Ishawari yokuhamba, isitya sezandla kunye neWC.
Igumbi lokulala 2: Iibhedi ezimbini, itafile esecaleni kwebhedi kunye nesibane, ikhabhathi eyakhelweyo eneshelufu kunye neentsimbi.
Kukho i-terrace encinci ebiyelwe ngodonga enetafile yamatye kunye nezihlalo ezifikelelekayo ukusuka kwigumbi lokuhlala. Abanini bezinja bafanele baqonde ukuba, nangona intendelezo ivalwe ngokupheleleyo kukho isithuba esingaphantsi kwesango apho inja encinane inokungena khona. Oku kuboniswa kwifoto yentendelezo.
Ngaphambi kwebhari kukho indawo yokupaka ngaphandle kwendlela yemoto enye. Kumgama nje omfutshane ukuya kwindawo eluhlaza kwilali kunye nokhetho lwayo oluhle lweevenkile, iigalari kunye neendawo zokutya nokusela.
4.78 ·Izimvo eziyi-9
Ilali eyonwabisayo yaseGeorgia emi kwindawo ekumganyana welitye ukusuka kunxweme oluzukileyo lwaseNorfolk kwaye yeyona inkulu kwiilali ezisi-7 zaseBurnham. Embindini wayo kukho ilali enkulu eluhlaza ejikelezwe nguKumkanikazi u-Anne kunye nezakhiwo zaseGeorgia, ezinecawe ezi-2 ezilele ekupheleni kwesitrato saso esikhulu.
Ngokungafaniyo nezinye iidolophu ezininzi zamaNgesi ezilawulwa ziziphindaphinda, iMarike yaseBurnham ineposi yesiqhelo, ibhula, umbhaki, ivenkile yehardware, ivenkile yeentlanzi kunye nekhemisti yazo zonke izinto eziyimfuneko kubomi bemihla ngemihla, kodwa kukho neevenkile ezingaphezu kwama-30 ezizimeleyo nezizimeleyo. , ukuthengisa uluhlu olubanzi lweemveliso zedeli ezinomdla, izincedisi ezidlamkileyo nezinesitayile sasekhaya nesitiya, iivenkile zeempahla ezikrelekrele, kunye neencwadi ezindala nezintsha. Kukho iindawo ezintle zokutya, ezona zibalaseleyo yiHoste Arms eyaziwayo eyindlu yokuqeqesha yeNkulungwane ye-17 kwaye ivuliwe imini yonke. Ngenxa yoko iMarike yaseBurnham itsala abantu abaninzi abadumileyo kunye nabatyeleli belizwe lonke, bexinana kakhulu ngamaxesha eholide, befumana igama lesiqhulo “Chelsea-on-Sea.” Kukho umnyhadala wonyaka womculo wasehlotyeni oneemvumi ezivunyiweyo ezonwabisa abahlali kunye nabenzi beeholide kwiindawo ezahlukeneyo ezifana necawa ethandekayo yaseBurnham Westgate kumda osentshona welali.
Ukusukela ekupheleni kukaNovemba ilali ikhanya kakuhle ngezibane zeKrisimesi kwaye yenza indawo efanelekileyo yokutyelela ukuthenga iKrisimesi.
Umbuki zindwendwe ngu- Sowerbys
We are a local well-established family-run agency specialising in the finest coastal holiday Norfolk holiday cottages, most of which are much-loved second homes. We have a fabulous…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Burnham Market